အလွယ်ဆုံးပဲ၊ ကျနော်က အချိန်ခိုး၊ လူပျင်းမို့….
၁) တစ်သက်လုံး ဆင်ဆင်ခြင်ခြင် နေတတ်ရင်တော့ အကောင်းဆုံးပေါ့။ ဟိ
– အဲ !!!! အစားမဖြတ်နိုင်သူ ကေဇီ ပြန်အစားမှာ ၆ ကေဂျီလောက် ပြန်တက်တာတော့ မပြောတော့ပါဘူးးး
ပို့စ်နဲ့ ဆိုင်ရင် ဆိုင်တယ်မှတ် (မဆိုင်လည်း ဂရုမစိုက်ပါဘူး တင်မှာပဲ )
မနေ့ကတော့ လုပ်သောက်ကြည့်တယ်။ ဒါပေမယ့် ငါးနာရီမစိမ်းထားမိဘူး။ ဒီနေ့ထပ်ပြီး အချိန်အတိအကျ စိမ်ပြီး သောက်ကြည့်ဦးမယ်။ ရေကတော့ မွှေးမွှေးလေးဖြစ်ပီး သောက်လို့တော့ အတော်ကောင်းတယ်။ သခွားသီးအစား ပန်းသီးထည့်မိလိုက်တယ်။ ဒီနေ့တော့ သခွားသီးထည့်ပြီး သောက်မယ်။